Paris Pass, igodo ndị njem nleta na obodo | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, Paris
Paris Ọ bụ otu n'ime obodo ndị kacha eleta anya na ụwa n'oge ọ bụla n'afọ. A ihunanya getaway, a izu ịga ya ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ na-aga site a mmanya ka a mmanya ma ọ bụ zụọ ahịa na nke kacha mma ejiji ụlọ ... isi obodo nke France na-enye ihe niile maka niile Amawaputala.
Mana na-eche naanị maka njem nleta na-agụta euro bụ na ọ na-enye ya Paris gafere, a njem njem ezi ihe nlereanya nke pụrụ ịbara gị uru, ọ ga-adabere na ihe ị na-eme atụmatụ ime na ogologo oge ị ga-anọ. Lee ị nwere ozi niile.
2 Paris gafere
3 Zụrụ Paris Pass
4 Kwesịrị ma ọ bụ ịzụta Paris Pass
N’ime ihe dị ka kilomita 105 na-ebi ihe karịrị nde mmadụ abụọ. Ọ bụ ihe dị mkpa Ego ego, ejiji na azụmahịa na Europe ewe gbakọọ ya gburugburu nde mmadụ asatọ na-aga eleta ya kwa afọ.
Ebe akụkọ ihe mere eme ya bụ ebe ihe nketa ụwa ọ bụ ebe a ka ị ga-ahụ ụfọdụ saịtị ngosipụta nke isi obodo French dị ka Katidral Notre Dame ma ọ bụ amara gothic nke Saint Chapelle. A na-akwụ ọtụtụ n'ime ebe nlegharị anya ndị a n'etiti nke a, nke ahụ na obere akpa anyị nwere ike ịta ahụhụ ntakịrị ma ọ bụ ọtụtụ.
Nke a na-abịa njem njem, nke a ma ama na ọtụtụ obodo na Europe. Ọbụlagodi na ị bụghị onye nwere mmasị ịgafe, maka na ị chere na ị na-akwụ ụgwọ maka ihe ị na-anaghị eji emechaa, ọ ga-adị mma mgbe niile ile anya ma tụọ ọnụahịa na ebumnuche anyị. Ya mere, gịnị banyere Paris gafere?
Ọ bụ njem nleta na gụnyere ịnweta njem nleta na njem. Ọ na-enye gị ohere izere ụfọdụ ahịrị, were ụgbọ ala ndị njem nleta ma ọ bụ nwee mbelata na ụfọdụ ebe nkiri ndị etinyeghị n'etiti ndị nweere onwe ha nke njem ahụ na-akwado.
Paris Pass na-enye gị ohere ịbanye Muselọ ihe ngosi nka 60, ihe ncheta na veranda nka, ama uwa niile. Ọ mejupụtara Ebe nkiri Paris, nke Paris nleta ngafe na Ihe ngosi nka Paris ma ị nwere ike ịzụta ya nọrọ ụbọchị abụọ, atọ, anọ ma ọ bụ isii.
El Ihe ngosi nka Paris gụnyere, n'etiti ndị ọzọ, D'Orsay Museum, nke Vlọ ihe nkiri Louvre, nke Igbe nke Mmeri, Notre Dame, ndị Alọ nke Versailles, Pantheon, Conciergerie, Centre Pompidou na ụlọ ụka gothic nke Saint Chapelle. Ọ bụrụ na ihe nkiri na-amasị gị, ọ dị mma, ọ bụrụ na ejiji na-amasị gị, ọ dịkwa mma, ọ bụrụ na ejiji na-amasị gị, mgbe ahụ n'ezie ị ga-ahụkwa ihe. Ihe kachasị mma bụ na na mgbakwunye na inye gị nnabata n'efu, ị na-ezere ahịrị ndị ahụ. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịbanye ọtụtụ oge ịchọrọ. Ugboro ise na Louvre? Odi nma, ekwela gi.
N'aka nke ọzọ, Ebe nkiri Paris Na-agabiga emepe ụzọ nke asaa na-adọrọ mmasị: Â Château, a Gallic wine detụ ụtọ ahụmahụ ukwuu tụrụ aro ma ọ bụrụ na-amasị gị mmanya, bateaus parisiens, a mma na-atụrụ ndụ irughari na Seine, Akụkọ Paris, mmekọrịta mmekọrịta na akụkọ ihe mere eme nke obodo, na Opera Garnier, ụlọ mara mma nke narị afọ nke 300, Grevin Museum na ihe ngosi 56, L'Espace Dalí raara nye onye na-ese ihe dị ukwuu na njem nke Montparnasse, ụlọ elu XNUMX ahụ nwere nnukwu echiche.
Na Louvre Museum, na Musée d'Orsay, Pompidou Center na Musée Grévin, a ga-ekwe nkwa ịbanye ngwa ngwa na-enweghị eriri, ihe ga-adaba adaba ma ọ bụrụ na ị gara n'oge okpomọkụ ma ọ dị ọkụ. Na mgbakwunye, Paris Pass na-enye gị ohere iji ụgbọ ala ndị njem nlegharị anya nke Paris nke ọnụahịa ya bụ euro 38 maka okenye. Lee ego! Ndị ọzọ ọnụahịa? Ọfọn, ọnụ ụzọ nke Grévin Museum na-efu euro 22, otu maka Opera Garnier 50 na nke maka Louvre Museum bụ euro 15.
N'ikwu okwu banyere bọs na njem, dị ka anyị kwuru na mbido, na Paris Pass gụnyere njem n'ime ókè obodo n'iji usoro metro ya, ụgbọ elu elu RER, ụgbọ ala ya, trams, Montmartre funicular na SNCF dị elu ụgbọ oloko dịpụrụ adịpụ. Ebe ndị ọ kpuchiri bụ 1, 2 na 3, ya bụ, obodo dum. Gafe na-abịa na ntuziaka site na netwọk njem ka ị nwee tiketi ọla edo na maapụ ahụ n'aka gị.
El Kaadị njem njem Paris Pass, nke ahụ bụ aha ya, ọ na-arụ ọrụ mgbe ị jiri ya na nke mbụ ya ma ọ dị irè maka otu ụbọchị ahụ Paris Pass ị zụrụ, ya bụ, ụbọchị abụọ, anọ ma ọ bụ isii. Kaadị ahụ pere mpe, n'ezie ọ dị ka tiketi nkịtị, yabụ ọ dị mkpa ịghara ichefu ya na igwe ma nwee ya mgbe niile na ebe nchekwa.
N'ikpeazụ, Ntughari Paris agunyeghi ịrịgo na Eiffel Tower, ma obu uzo nke Catacombs nke Paris.
Zụrụ Paris Pass
Taa ị nwere ike ịzụta ihe niile maka Internet ma nata ya n'ụlọ gị ma ọ dị mma. Mbupu sitere n'aka FedEx. Ma ọ bụrụ na ịnọghị n'ụlọ n'ihi na ị na-arụ ọrụ ma ị na-atụ ụjọ na ị gaghị agba ọsọ n'ime onye na-ekesa akwụkwọ ozi, ị nwere ike ịzụta ya na kwụọ ụgwọ n'ịntanetị ma wepụ ya ozugbo ị rutere Paris.
Ọ bụrụ n ’ị bulie ya na Paris, ị kwụrụ ụma euro abụọ ọzọ, bipụta ihe a na-ezitere gị site na mail ma bulie ngafe na ebe ụfọdụ n’obodo ahụ. Mbupu na ụwa na-efu ihe dị ka euro 10 ma were ihe dị ka ụbọchị ọrụ 15, ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ngwa, FedEx na-abata ebe a, ọ na-efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 40 ma were naanị ụbọchị isii ọrụ.
Kwesịrị ma ọ bụ ịzụta Paris Pass
Enweghị m ike ịnye gị azịza siri ike. Azụtabeghị m ya ma ejiri m ụbọchị iri na abụọ mara mma na Paris, mana enwere m enyi nke zụtara ya wee were ihe ọ juiceụ juiceụ ... Ọ dabere na mmasị gị na ihe masịrị gị. Onwe m, abughi m onye njem nleta, onye ga-ahụ ihe ọ bụla n'agbanyeghị ogologo oge m nọrọ ebe ahụ, yabụ ejiri m obi m niile.
Ugbu a, ọ bụrụ na ihe kacha gị mkpa bụ ịmata ihe niile ị nwere ike ime, mgbe ahụ ọ nwere ike ịdịrị gị mma. Ums nwere ebe ngosi ihe mgbe ochie na-amasị gị? Mgbe ahụ n’enweghị mgbagha ọ bụ maka gị n’ihi na ọ ga - ahapụ gị ịbanye ọtụtụ oge ịchọrọ ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ngosi ihe mgbe ochie kacha mma. Ugbu a, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga ije, hụ ndị mmadụ, pụọ iri nri ma ọ bụ gbaa ịnyịnya ígwè gị ebe niile… Echeghị m otu ahụ. Ma eleghị anya, ị nwere ike iri uru nke kaadị Paris ọzọ dị ka nke ahụ Paris passlib.
Paris Passlib yiri ma ọ dị ọnụ ala. Na-enye ohere ịnweta mkpọ nke gụnyere Paris Viste Pass (njem), Paris Museum Pass, ọnụ ụzọ nke ebe ncheta na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, Open Tour Bus, asọmpi nke ọzọ Big Bus, Bateaux Parisiens, njem nke Seine, map na ego na Eiffel Tower (ugwo). A na-azụkwa ya n'ịntanetị ma zigara ya site na DHL.
Ọ dị mma ugbu a Gịnị bụ ọnụahịa nke Paris Pass?
2bọchị 131: euro 81 maka njem okenye, 12 maka ngafe ndị ntorobịa (17 ruo 44 afọ), euro XNUMX maka nwa ahụ gafere.
Daysbọchị 3: 165, 100 na 50 euro.
Daysbọchị 4: 196, 109 na 57 euro.
Daysbọchị 6: 244, 135 na 75 euro.
Cheta na etinyeghị Paris Museum Pass maka ndị nọ n'afọ iri na ụma na ụmụaka, ebe ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nwere nnabata n'efu. Dị ka ị ga-ahụ, ọ bụghị ọnụ ala gafere ka ị ga-anọdụ ala nwa oge wee mee ọnụọgụ iji hụ ego ole ebe nkiri na-efu anyị iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Paris » Paris Pass, igodo ndị njem nleta na obodo
Gafere obodo nta nke French Basque Country